PDRC iyo Wasaarada Shaqada & shaqaalaha oo si wada jira ah u xusay Maalinta Nabada Aduunka | sowora
← Press release: UN Women Goodwill Ambassador Emma Watson calls out to men and boys to join HeForShe campaign –
Emma Watson Delivers Stirring Speech at U.N →
PDRC iyo Wasaarada Shaqada & shaqaalaha oo si wada jira ah u xusay Maalinta Nabada Aduunka
Posted on September 22, 2014	by sowora
Xarunta Cilmi Baarista PDRC iyo wasaarada shaqada, shaqaalaha, dhalinyarada iyo sportska Puntland ayaa maanta siwada jir ah u dhigey Maalinta Nabada Aduunka oo sanadkasta la xuso 21 September.
Munaasabada xuska oo ka dhacday xarunta PDRC Garoowe ayaa waxaa ka soo qayb galay Wasiirka Shaqada iyo Shaqaalaha, Wasiirada, Warfaafinta iyo Ganacsiga, waxaa sidoo kale ka qayb galay masuuliyiinka ka socday UNSOM, ururada Bulshada, Haween, dhalinyaro iyo mart kale.
Cali Faarax Farmayeeri oo ah agaasime ku xigeenka hay’ada Cilmi Baarista Puntlad PDRC oo khudbad dhinacyo badan oo nabada ah ka jeediyey goobta isagoo ka hadlay doorka ay PDRC ku leedahay ka shaqaynta Nabada isagoo sheegay beelo ay kala dhexgeleen hadana qayb ka mida u marayso gunaanadka khilaafka.
Gudoomiyaha PUNSAA Nuur Shire Cismaan oo ka mid ahaa masuuliyiinta ka hadlay munaasbada ayaa sheegay in dalka u baahan yahay cadaalad isagoo tilmaamay hadii cadaalad la helo in nabadu ay tahay mid la helayo oo la socota cadaalad isagoo tusaalooyin kala duwan u soo qaatay helida cadaalada, khaasatan waxa uu cadaalad kula dardaarmay dowlada.
Haweenay ka socotay Xafiiska UNSOM ee garoowe ayaa sheegtay in loo baahan yahay in la helo nabad ay tahay mid wanagsan nabduna ay tahay mida lagu nool yahay, waxay balan qaaday in xafiiska QM ee Soomaaliya uu diyaar u yahay in uu taageero nabada Soomaaliya.
Wasiirka wasaarada Shaqada iyo Shaqaalaha Puntland C/raxmaan Axmed Cabdulle ayaa ka hadlay sida waalidiinta iyo bulshada rayidka ay uga qayb qaadan karaan ilaalinta Nabada wuxuu kula dardaarmay ka soo qayb galayaasha ilaalinta nabada iyo dhiiri gelinta ka shaqaynta Nabada.
Wasiirka wasaarada warfaafinta C/wali Xirsi Cabdulle Indhaguran oo xaflada soo xirayayaa sheegay in dowlada Puntland ay diyaar u tahay sidii ay u xalin lahayd khilaafaadka beelaha Puntland, isagoo tilmaamay in dolwada Puntland iyo dadkeeda ay yihiin dad nabada jecel.
Waxa uu ka hadlay wasiirku in khilaafaadka ay ka dhacaan meel umad iskugu yimaadaan balse ay tahay mida la is dheer yahay nabadaynta colaada iyo dhamaynta khilaafaadka.